महँगियो निर्माण क्षेत्र : एक करोडमा बन्ने घर अहिले कतिमा बन्ला ? – ToplineKhabar
March 24, 2017 नरेस तिवारी0Comment
काठमाडौ – नेपालको निर्माण क्षेत्र महँगिदै गएको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य र मजदूरको ज्याला बढ्दै गएपछि निर्माण महँगो भएको हो । सरकारले संकलन गरेको प्रारम्भिक मूल्य सूचकांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा निर्माण क्षेत्रमा १८ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । यस अवधिमा निर्माण सामग्रीको मूल्य १२.८ प्रतिशत र ज्याला ३०.६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
यदि ०७१/७२ मा एउटा घर करोडमा बन्थ्यो भने ०७२/७३ मा त्यस्तै घर बनाउन एक करोड १८ लाख रुपैयाँ लागेको छ । नेपालमा निर्माण सामग्रीको मूल्यभन्दा पनि मजदुरको ज्याला वृद्धिदर उच्च छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार एउटा भवन बनाउँदा निर्माण सामग्रीमा ७०.५० प्रतिशत र ज्यालामा २९.५० प्रतिशत रकम खर्चिनुपर्छ । निर्माणमा दुई तिहाइभन्दा बढी लागत भार निर्माण सामग्रीको हुने विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
मुलुकमा अहिले धमाधम विकास निर्माणको काम भइरहेको छ । सहरी विकास, सडक, घर/भवन, जलविद्युत् परियोजना, विमानस्थल, हाउजिङ, अपार्टमेन्ट निर्माण कार्यले तीव्रता पाइरहेको छ । निर्माण लागत पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । गत वर्ष विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्रीको हाहाकार नै भयो । भूकम्प लगत्तै निर्माण सामग्रीको माग ह्वात्तै बढेपछि व्यापक कालोबजारी पनि भएको थियो । अभाव चर्किएपछि निर्माण सामग्रीको मूल्य झन्डै दोब्बर भएको थियो । तर, तथ्यांक विभागले बजारमा अनौपचारिक रूपमा बढाइएको भाउ समेटेको छैन ।
समीक्षा वर्षमा सिमेन्ट, गिटी, ढुंगा, मोटो, बालुवा, इँटा, डन्डी, आल्मुनियम, सिसा, बिटुमिन, जिंक सिट, टायल, पोलिथिन पाइप एन्ड फिटिङलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ । निर्माण क्षेत्रका इन्जिनियरदेखि पेन्टरसम्म सबैको तलब/ज्याला उच्चवृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय मुलुकमा ‘लेबर कस्ट’ अत्यधिक महँगो भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
← गोविन्द गौरवित र सरकारको सुली
प्रधानन्यायाधीशलाई नै सर्वोच्चको यस्तो परमादेश →
जनकपुरको साँचो मोदीलाई बुझाउने तयारी !
साइप्रस प्रहरीले यमुना खपांगी मगरको डुबेर नै मृत्यु भएको रिपोर्ट तयार
August 20, 2017 प्रदीप भट्ट 0
‘माओवादी’ हटाएपछि कार्यकर्ता असन्तुष्ट
March 6, 2017 toplinekhabar 0